Misaona ny tontolon’ny fanatanjahantena: kalaza telo mirahalahy indray maty - ewa.mg
Misaona ny tontolon’ny fanatanjahantena: kalaza telo mirahalahy indray maty
News - Sport - Misaona ny tontolon’ny fanatanjahantena: kalaza telo mirahalahy indray maty
Misaona tanteraka ny tontolon’ny
Fanatanjahantena eto Madagasikara. Mpanao fanatanjahantena telo
mirahalahy be izao no indray maty, ny faran’ny herinandro teo.
Andrianafetra Faly “Le Roi Lion”, eo amin’ny taranja familiana
fiarakodia, i Maitre Mamy, ho an’ny taranja taekwondo ary
Rafalimanana Jhonny Patrick (Rasta), taranja rugby. Ireo ny
andrarezina eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena indray na­moy
ny ainy. Tsy mifidy saranga ny Covid 19 fa na mpanao
fanatanjahantena matanjaka aza dia tsy amelany. Raha ny
an­gom-bavao voaray mantsy, voamarina fa noho ny tsimokaretina
Coronavirus no nahalavo an’ Andrianafetra Faly na i Le Roi Lion,
izay avy hatrany dia nalevina omaly ihany. Olobe teo amin’ny
sehatry ny fanamoriana fiarakodia izy satria ankoatra ny maha
filoha lefitry ny FSAM (Fé­dération du Sport Automo­bile de
Madagascar) azy dia efa nandrombaka ny anaram-boninahitra ho
tompondakan’i Ma­dagasikara imbetsaka i Faly be. Ny fiara P.504,
P.106 ary P.206 ny efa nifandimbiasany nentina tamin’izany. Efa
hita teo amin’ny sehatry ny politika ihany koa Andrianafetra Faly.
Efa kandidà ho ben’ny Tanànan’Atsimon­drano, tao amin’ny antoko
TIM, tamin’ny fifidianana farany teo ny tenany.
Raha ny momba an’i Maitre Mamy indray, dia tsy nisy tsy
nahafantatra azy ny teo amin’ny taranja taekwondo. Nanomboka
niditra teo amn’ity taranja ity izy, ny taona 2001, tao klioban’ny
Horinu Sansu ary ny sokajin-danja teo anelanelan’ny 72kg
hatramin’ny 78kg no nisy azy. Tamin’ny 2010 kosa no lasa mpitsara
ary saika hita nandray anjara hatrany teo amin’ny lafin’ny
fitsarana ireo fifaninanam-pirenena sy ny fiadiana ny tompondakan’i
Afrika, tamin’ny taona 2012. Namela mananotena sy kamboty roa i
Mahakasika an-dRafali­manana Jhonny Patrick na i Rasta kosa, izay
fantatry ny maro teo amin’ny taranja baolina lavalava, 34 taona izy
izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Ny toeran’ny “2ème ligne” sy
“3ème ligne” tao amin’ny klioban’ny XV family ny nisy azy.Tao
amin’ny fileovana Andranomanalina no nilalaovany fony sokajy junior
ary nifindra tao amin’ny XV family taorian’izany ka hatramin’izao.
Raha ny nambaran’ny olona akaiky azy, tampoka ihany ny
fahafatesany. Mbola natanjaka tsara izy, ny alakamisy lasa teo ary
nitaraina ho narary vavony kosa anefa taorian’izay ka izao nitarika
hatramin’ny fahafatesany izao. Tsy mbola voamarina tsara, araka
izany, izay tena nahafaty ireto roa lahy farany ireto.
Mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’izy telo mirahalahy.
L’article Misaona ny tontolon’ny fanatanjahantena: kalaza telo mirahalahy indray maty a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 27/07/2020
Kaominina Toamasina I: nomen’ny Spat fitaovana marobe
Maromaro ny fitaovana natolotry ny Orinasa mitantana ny seranan-tsambon’i Toamasina (Spat) ny kaominina Toamasina I, ny asabotsy teo. Fitaovana hanadiovana sy hanazava ny tanàna (angady 50, borety 50, kifafa vy, rateaux 50 ary ampola 800). Nisy ordinatera miisa roa koa nanampy ireo.Nilaza i Tsifoina, nisolo tena ny tale jeneralin’ny Spat, fa vonona hatrany ity orinasam-panjakana ity hifanome tanana hampandrosoana ny tanànan’i Toamasina. Ho an-dRtoa Doris, nisolo tena ny fiadidiana ny Repoblika, nanatrika ny fotoana, “tonga amin’ny tenin’ny filoha Rajoelina izao hoe : “ampio aho mba hanampiko anareo””. Notsipihin’ny PDS-n’i Toamasina I, Razafimanana Jean Christin, fa “manomboka tratra amin’ny ampahany ny fampanantenana nataoko ho an’ny vahoakan’i Toamasina, hiainan’ny vahoaka amina tanàna madio, misy jiro manazava ny arabe vita godirao”.Natomboka tamin’io fotoana io avy hatrany ny fanadiovana faobe ny araben’ny Fahaleovantena.Sajo sy Njaka A.L’article Kaominina Toamasina I: nomen’ny Spat fitaovana marobe a été récupéré chez Newsmada.
Raharaham-panjakana : fivoriana hiarahana amin’ny UE
Nampahafantarina, nandritra ny filankevitry ny minisitra, ampitain-davitra (visio-conférence) ny alakamisy 23 jolay teo fa hatao, ny 13 aogositra 2020 ho avy izao, ny fivoriambe iarahana amin’ny Vondrona eoropeanina. Fiaraha-midinika hijerena ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy ny UE ity hotanterahina ity. Tokony amin’ny 30 jolay ny fotoana ho nanatanterahana azy, saingy izao nahemotra izao indray. Anisan’ny hivoriana amin’io ny hampahafantarana ny UE ny tena filàn’i Madaga­sikara, angatahiny fanohanana amin’ny Vondrona eoropeanina. Miankina amin’ny fivoaran’ny toe-draharaha amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao eto amintsika ny fomba sy endrika hanatanterahana ity dinika politika ity. Andiany faha-8, fanao isan-taona, ity dinika iarahana amin’ny UE ity. Manatrika ny fo­toana ny masoivohony eto amintsika, miaraka amin’ireo firenena mpikambana ao aminy, manana masoivoho sy miara-miasa amin’i Madagasi­kara. Anisan’ny nivoriana ta­min’ny andiany farany (2019) ny fametrahana fanjakana tan-dalàna, ny famatsiam-bolan’ny UE ho an’i Madagasikara amin’ny lafiny samihafa, toy ny fanampiana ny tetibolam-panjakana ny fa­nanganana fotodrafitrasa, sns.Njaka A.L’article Raharaham-panjakana : fivoriana hiarahana amin’ny UE a été récupéré chez Newsmada.
Fahalalana sy fahaizana : afaka mifa­meno ny fahiny sy ny ankehitriny
Hatreto, mbola maro amin’ny Malagasy tsy resy lahatra fa manana fahalalana goavana be ny Ntaolo. Tsy niravaka diplaoma maro noho ny fandrantoana fianarana tany an-tsekoly izy ireny fa niaina sy nandia fiainana tao anatina taona maro (analinkisa) io fahalalana any aminy io. Manam-pahalalana lalina ny Malagasy fahiny. Ny ankehitriny indray, manaka-danitra amin’ny fahaizana satria nianatra tao anatina rindrina efatra. Tsy nampianarin’ny zavaboahary fa nampianarin-dramose sy ry madama. Tsy tokony hifanipaka anefa ireo raha tena mikatsaka fandrosoana marina ny Mala­gasy sy i Madagasikara. Afaka mifameno tsara na ninian’ny vahiny nampifandonina ny Ma­lagasy mahatana ny fomba amam-pahalalana navelan’ny razana sy ny avara-pianarana. Ny fampifanatonana ireo sokajin’olona roa ireo no anisan’ny antoka lehibe hiverenana an-doharano sy hirosoana any amin’ny fivoarana tsaratsara kokoa hatrany. Paikady hoenti-manatanteraka izany ny fampidirana tsikelikely ny maha Malagasy any amin’ny fandaharam-pianarana sy ny famerenana miandalana ireo karazana dinidinika sy tafatafa eo amin’ny zanaka sy ny ray aman-dreny, eo anivon’ny ankohonana tsirairay.HaRy RazafindrakotoL’article Fahalalana sy fahaizana : afaka mifa­meno ny fahiny sy ny ankehitriny a été récupéré chez Newsmada.
Musique : Emergence de la scène électronique tananarivienne
Dernière performance scénique de ces jeunes pousses de la musique assistée par ordinateur malgache. (crédit photo : Tanteliniana Ram) La musique électronique à Antananarivo, c’est tout un autre univers. Ces musiciens ne sont pas nouveaux dans le paysage musical malgache, mais leur musique semble être venue d’ailleurs. Musique électronique et musique assistée par ordinateur (M.A.0), c’est le collectif Buskers Madagascar (un groupe de jeunes qui réunit des passionnés) qui a eu l’idée de mettre sur la même scène ces deux univers musicaux pour la première fois en novembre 2019. Un événement qui n’est pas passé inaperçu puisque le public a répondu et continue de répondre présent jusqu’à l’heure où l’on parle. Parmi les jeunes artistes soutenus par ce mouvement figurent Loop Gang, Encoder Experiment, Tooln Rap, ou encore Kevin Mirija. Des artistes en herbe qui ont été les têtes d’affiche d’un événement qui a eu lieu au Kaly Bar Ankadifotsy le 31 octobre 2020, juste au moment de la reprise culturelle après la crise de la Covid-19. Des pads et des guitares. La musique électronique pratiquée par ces jeunes malgaches n’a toutefois rien de novatrice par rapport à ce qui se pratique déjà ailleurs. Cela peut nous faire penser aux premiers albums de Massive Attack, de Tricky ou de Portishead, les leaders du Trip Hop anglais, et ce même s’ils n’ont jamais cité ces groupes. Par contre, nous ne pouvons pas le nier, c’est bien nouveau à Madagascar, des guitares qui se mélangent à du sampling et à du looping. Cela a de quoi éveiller la curiosité, tout en émerveillant les adeptes locaux du son de Gorillaz et autres groupes de ce genre. De plus, il est incontestable que ces musiciens montrent une certaine maîtrise de leurs instruments qui comprennent des boîtes à rythmes, des ordinateurs et des synthés. Convaincu du potentiel de la scène électronique tananarivienne, Buskers Magazine soutient une nouvelle fois ces artistes à travers une programmation le 19 décembre 2020 à Le Cinquième Elément Ankadivato. Selon Haridio Randriamanantsoa, un des fondateurs de Buskers Magazine, « cet événement sera exceptionnel. Il ne s’agit pas uniquement d’un concert musical mais d’un événement qui regroupe atelier, live vidéo, et mapping». Le rendez-vous est donc fixé pour découvrir ce que vaut réellement cette nouvelle scène. Anja RANDRIAMAHEFA L’article Musique : Emergence de la scène électronique tananarivienne est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Musique : Emergence de la scène électronique tananarivienne a été récupéré chez Midi Madagasikara.
“Europa league”: Barea efatra no hiatrika izany
Tontosa omaly ny antsapaka eo amin’ny fifaninanana hiadiana ny amboaran’i Eoropa “Europa league”, taranja baolina kitra. Hiatrika izany, amin’ity, ireo mpilalaon’ny Barea de Madagascar efatra mirahalahy, i Abel Anicet, i Hery Bastien, Ilahimaharitra Marco ary i Sylvio Ouassiero.Raha ny fandaharam-potoana, hiatrika ny fihodinana faharoa ny Linfield FC, hilalaovan’i Hery Bastien ka hifanandrina amin’ny Floriana FC, tompondakan’i Malte. Toy izany koa i Sylvio sy ny SC Fola Esch, izay hanafika any Armenia ka hifandona amin’ny FC Ararat. Samy hotanterahina ny alakamisy 17 septambra avokoa ireo lalao roa ireo.Avy hatrany kosa dia miandry eo amin’ny fihodinana fahatelo i Marco sy ny Royal Charleroi SC ka hidona amin’izay ho mpandresy eo amin’ny FC Sfintul sy ny FK Partizan. Fihaonana, hatao ny 24 septambra ho avy izao. Mitovy amin’izay koa ny Ludogorets-n’i Abel Anicet, kapitenin’ny Barea de Madagascar, saingy tsy mbola fantatra izay ho mpifanandrina amin’izy ireo. Voalahatra ny 1 oktobra kosa anefa ny lalaony. Tompondaka L’article “Europa league”: Barea efatra no hiatrika izany a été récupéré chez Newsmada.
Bilan Covid-19 du 31 juillet : 0 décès et 2 nouveaux cas
Seulement 2 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés le 31 juillet 2021, sur un total de 170 tests effectués sur l’ensemble du territoire, soit un taux de positivité de 1,17%. Par ailleurs, le nombre de personnes se trouvant dans un état grave accuse une baisse significative. En effet, à la date du 31 juillet, 22 cas graves sont recensés. On repasse ainsi en dessous de la barre des 30 cas graves, si ces derniers jours, ce nombre semblait stagner autour de la trentaine, voire la quarantaine il y a quelques semaines. Au chapitre des guérisons, 8 patients ont été déclarés officiellement guéris et comptabilisés parmi les guérisons à la date du 31 juillet. Quant aux décès, aucune personne décédée de la Covid-19 n’a été enregistrée à cette même date. Le décompte officiel reste à 947 décès liés à la Covid-19 à Madagascar depuis mars 2020. À ce jour, les données récapitulatives disponibles affichent un cumul de 42.735 cas confirmés de Covid-19 sur un total de 227.325 tests effectués depuis mars 2020. Le nombre total des guérisons est de 42.385. Hanitra R. L’article Bilan Covid-19 du 31 juillet : 0 décès et 2 nouveaux cas a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Atsinanana: harenina ny lalana Manambato, Ambila …
Feno dimy, ny 22 jolay teo, ny isan’ny fitaovana vaventy fanamboaran-dalana azon’ny faritra Atsinanana. Nambaran’ny governora, Rafidison Richard Théodore, fa hosantarina hanarenana ny lalana mankany amin’ny toerana ara-pizahantany ireo fitaovana ireo. Antony, mba hameloman’aina indray ity sehatra iray tena potiky ny tranga Covid-19 ity. Isan’izany ny lalana mirefy 7 km, miala eo Brickaville (RN 2) mankany Manambato. Hanomboka amin’ny volana aogositra ny asa ary haharitra iray volana. Aorian’izay, ny avy eo amin’ny RN 2 ihany, mankany Ambila Lemaitso, mirefy 13 km ary mitohy any Andovoranto, mihazo ny tetezan’Andavakomena.Hatao Antanambao ManampotsyFantatra koa fa hanomboka amin’ny volana oktobra, amin’ny fotoana tsy hisian’ny orana ny lalana RN 11 A, mankany Antanambao Manampotsy, araka ny toky nomen’ny filoha Rajoelina. Nampatsiahy ny governora Atsinanana, fa tsy hanamboatra lalana hatao godirao ireto fitaovana azon’ny faritra maromaro eto amin’ny Nosy ireto, fa entina hanafahana ireo kaominina tsy hitoka-monina, noho ny haratsian-dalana, mifandray amin’ny distrika isanisany avy. Avy amin’izany no hivoahan’ny vokatra isaky ny kaominina.Sajo sy Njaka A.L’article Atsinanana: harenina ny lalana Manambato, Ambila … a été récupéré chez Newsmada.
Radanoara Julien: “Tsy homena ny vahiny ny sehatra stratejika”
“Jerena aloha: inona ny tombontsoa amin’ny fampandrosoana ny firenena miantso vahiny hampiasa vola? Tsy maintsy mifanaraka amin’izay ny fampiasam-bola ataon’ny olona izay antsoina hampiasa vola ao amin’ilay firenena”, hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien. Harahin’ny fanjakana maso ny fampiasam-bola ataon’ny avy any ivelany na ny fikambanan’orinasa iraisan’ny firenena maromaro.Ny mpitondra koa no manoritra ny fampiasam-bola amin’ny sehatra etsy sy eroa. Mba tsy hitongilana ny fampandrosoana amin’ny firenena iray ka tsy ho marin-toerana. Anjaran’ny fanjakana ny manara-maso ireo fikambanan’orinasa iraisan’ny firenena maromaro sy ny vahiny mampiasa vola eto. Tsy azo omena ny fikambanan’orinasa iraisan’ny firenena maromaro ny sehatra stratejika eo amin’ny firenena: ny angovo, ny banky, ny solika…Mijery ny politika anatiny ny orinasa vahinyTsy maintsy mijery ny politika anatiny ny fikambanan’orinasa iraisan’ny firenena maromaro, raha vao mitazona sehatra stratejika amin’ny firenena iray. “Raha mpitondra tsy mifanaraka aminy na tsy maharo ny tombontsoany: tsy maintsy miditra ry zareo hanongana ny mpitondra”, hoy izy. Na misy aza tonga hatrany amin’ny famonoana ny filoham-pirenena. Efa niseho tatsy Afrika izany. Misy kompanian-tsolika efa nanao izany tany Burkina Faso, RDC, tany Tchad vao haingana…Raha ny firenen-dehibe ka voakitikitika ny tombontsoany, manao ny fomba rehetra izy hiarovana izany. Misy ny lalàna iraisam-pirenena ny amin’izany: raha misy fifandirana na ady eo amin’ny firenena roa, tsy tokony hampiasa herisetra ny firenena fa resaka diplaomasia na fitsarana iraisam-pirenena no aleha. Tsy manaraka an’izany ny firenena lehibe raha vao ny tombontsoany no voakitikitika fa ampiasaina avokoa ny fomba rehetra.R.Nd.L’article Radanoara Julien: “Tsy homena ny vahiny ny sehatra stratejika” a été récupéré chez Newsmada.
Hentitra ny baikon’ny filoha ho an’ny Foloalindahy: “Hiaro ny tanindrazana amin’ny fahavalo ianareo”
Fivoahana voalohany ary tany amin’ny Foloalindahy avy hatrany taorian’ny nikasan’ny sasany hamono ny filoha. Nambarany tamin’izany fa zava-dehibe tokoa izany fanoloran-tena sy firosoan’ireto andiany ireto hanatevina ny Foloalindahy. Mifono adidy sy andraikitra lehibe eto amin’ny firenena izany ary adidy masina sy mavesa-danja. Nomeny toromarika ny Foloalindahy fa kiadin’ny firenena ary tandroka aron’ny vozona. Iankinan’ny fiandrianam-pirenena sy antoky ny fandriam-pahalemana. Hitandro ny filaminana eo anivon’ny fiarahamonina ary hiaro ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana. “Manana andraikitra koa ianareo amin’ny asa fampandrosoana satria ny vahoaka milamina no afaka mamokatra sy mampandroso. Adidy masina no hiantsorohanareo. Hiaro ny tanindrazana amin’ny fahavalo, na avy any ivelany na avy ato anatiny, mikasa sy mitetika hanao ratsy, ny hanakorontana, ny handrava sy handrodana na hanitsakitsaka ny Malagasy, ny tanindrazatsika, ny soatoavintsika ianareo”, hoy izy. Nanteriny fa misy ny “Ambana” ka tsy maintsy mandray andraikitra feno ny mpitandro filaminana, miatrika ireo rehetra mety hanohintohina ny fiandrianam-pirenena sy ny filaminana. Na izany aza anefa, nohitsin’ny filoha fa mitaky fahafoizan-tena sy fanajana fitsipi-pifehezana ny fampiharana sy ny fanatanterahana ireo fiofanana azo. Tokony handimby ny tsara vitan’ireo zoky, indrindra fa ny anarana entina, amin’ny alalan’ny “Général de Corps d’Armée” Ismael Monibou, modely ho an’ny tafika fony fahavelony.Aorian’ny filoha ny FoloalindahyNanamafy izany ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard fa milahatra aoriana amin’ny fiarovana ny filohan’ny Repoblika, filoha faratampon’ny Foloalidahy ny fiarovana ny vahoaka malagasy amin’ireo hanakorontana. “Afaka mandry ivohon’ny vato ianao fa eto izahay aorianao sy miaro anao, miaro ny vahoaka malagasy, miaro ny fiaindrianam-pirenena”, hoy izy.Notsofin-drano tamin’izany koa ny andiany faha 44, misalotra ny anaran’ny amiraly Ratsiraka Didier narahin’ny fanolorana sabatra ho an’ny Ombimangan’ny andiany faha- 43. Miisa 69 kosa ireo andiany faha-42 ka miisa telo ny vehivavy. Nisy ny fametrahana galona ho an’ireo lietna lefitra avy amin’ny andiany faharoa. Notokanana koa ny “Amphi tactique” na trano famolavolana ny paikady ara-miaramila.Tsiahivina fa niorina ny taona 1966 ny Acmil ao Antsirabe.Synèse R. L’article Hentitra ny baikon’ny filoha ho an’ny Foloalindahy: “Hiaro ny tanindrazana amin’ny fahavalo ianareo” a été récupéré chez Newsmada.
Nitondra ny heviny, momba ny lafiny fiarovana sy ny fiambenana ny filoham-pirenena, ny Jly Rabarisoa Ranto. Nanteriny fa matetika koa mivadika ireo mpiambina akaiky, tahaka ny fahita any amin’ny firenen-kafa.“Matetika misy i Jodasy, araka ny finoana kristianina, sy ny voalazan’ny Baiboly. Tahaka izany koa, misy ny mpiambina akaiky mivadika. Efa fahita amin’ny firenena sasany izany nefa tsy azo amaivanina”, hoy izy, omaly. Nambarany fa misy ny fanadihadiana sy ny fametrahana fitokisana amin’ireny mpiambina mpitondra ambony ireny. Na izany aza, tsy tokony hororitina ny momba ireo olona: mpanakanto, mpitandro filaminana efa anaovana famotorana sy fanadihadiana momba ny fifofoana ny ain’ny filoha, araka ny nambarany hatrany. Tsy tokony hatao tompon-trano mihono kosa anefa ny vahoaka. “Avelao hanao ny asany ny tompon’andraikitra sy ny fitsarana…”, hoy ihany izy. Notsindriny fa tsy azo ihazakazahana ny fanadihadiana. Mandinika sy mandalina tsara ireo ireo mpanadihady, araka ny nambarany. Tsy mora izany manongam-panjakana na famonoana izany. Tsy voatery ho manamboninahitra ambony koa anefa izy ireny. Efa niseho izany tany Liberia. Ny serzà Samuel Doe, nanongam-panjakana.Nohamafisina ny fiarovana ny filohaEtsy andaniny, nitondra fanazavana momba ny fiarovana sy ny fiambenana ny filoham-pirenena sy ny fianakaviany ity jeneraly misotro ronono ity. Nanteriny fa nohamafisina ary tsy ny eo anivon’ny fiadidina ny Repoblika “Présidence” fotsiny ihany ny misahana izany. Eo ny fanangonam-baovao ataon’ny mpitandro filaminana rehetra. Mandravona izany rehefa mitoetra ny ahiahy amin’ny filaminam-panjakana. Misy ny manao ny famotorana ary mivory sy maka fanapahan-kevitra miaraka amin’ny “Présidence” avy eo, araka ny nambarany. “Voaporofo izany izao fa efa noketrehina am-bolana maro ary narahi-maso hatrany izao fikasana hifofo ny ain’ny filoha izao”, hoy ihany izy.Tsiahivina fa anisan’ny manampahaizana manokana sy tompon’ny traikefa amin’ny fiambenana filoham-pirenena ny Jly Rabarisoa Ranto.Synèse R.L’article Jeneraly Rabarisoa Ranto: « Matetika koa misy Jodasy mamadika… » a été récupéré chez Newsmada.